रमाई गाउँको अधुरै रहर : तिर्खा नमेटी जुनी बित्यो कहिले पानी आउला र पिउला « Postpati – News For All
केबी गुरुङ पढ्न लाग्ने समय : ६ मिनेट
पानीको पाईप काटेपछि बग्दै गरेको पानी
माघ २९, काठमाडौं । सुर्यले पश्चिमको डाँडो काटेर बास खोज्दै थियो । गुम्थलेको डाँडामा रहेको चिया पसलमा जय बहादुर वलीले पानी मागे । चिया साहुनीले पानी दिंदै थिइन्, वलीले भने ‘घरमा पानी छैन, यतै टन्नै खाएर जानु पर्यो’ ।
उनले अचेलको यस्तो चिसो याममा पनि एक जग पानी घुटुघुटु पिए, अनि लामै डकारे ।
उनको यो पिडामा सिंगो गाउँको बिम्ब झल्किन्थ्यो ।
कल्पना गरौ त । पानी बिनाको गाउँ र शहर कस्तो हुन्थ्यो होला ?
अझै गर्मी चढेको छैन । मौसम चिसो छ । पानीका मुहानहरु अझै सुकेका छैनन् तर अब केहि दिनमै गर्मी बढ्ने छ । कुवाहरु सुक्ने तरखरमा छन्, मुहानहरु साँघुरीदै छन् ।
मानव जीवनका लागि सबै भन्दा आबस्यकता के हो ? भनेर कसैसंग उत्तर खोजियो भने प्रायको उत्तर ‘पानी’ हुन्छ । ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक प्राणि तथा बनस्पतिको जिबन चक्र पानीमै निर्भर रहेको हुन्छ । यसरी पानीको अभाव सिर्जना हुँदा कैयौ ठुला ठुला शहरहरु बिस्थापित भएका छन्, गाउँहरु बसाई सराईका नाममा बिस्थापित भएका छन् । कैयौ अमुल्य जीव-जन्तुहरु लोप भएका छन् ।
पानी बन्द गरिदिपछी स्थानीय न्याय खोज्दै
यस्तै नेपालका कैयौं गाउँहरु छन्, जो पिउने पानीको अभावमा तड्पिरहेका छन् । जय बहादुर वलीले जस्तै आउदै गरेको प्यासका लागि पेटमै पानी साँच्नेहरु कैयौ छन् ।
रोल्पा जिल्लाको गंगादेव २ रमाई गाउँका बासिन्दाहरु बिगत देखि नै पिउने पानीको हाहाकारमा कलहको जिन्दगी बिताई रहेका छन् । उनीहरुले पानी पिउनका लागि छिमेकीहरु संग संग्राम गरिरहेका छन् ।
रमाई गाउँमा जम्मा १ सय ३ घरधुरी छन् । त्यहि घरधुरी मध्यका हुन् जय बहादुर वली ।
रमाईको बिच गाउँमा एउटा कुवा छ । त्यो कुवाको पानी प्रयाप्त छैन । बिहान भालेले डाँको नछोड्दै उठ्नेहरूले कुवाको लाइनमा बस्न भ्याए भने मुख सित्याउने पानी पाउनेछन नत्र पानीको हाहाकार झेल्ने छन् ।
प्रतिकूल बातावरण र बस्ति बाक्लिदै गर्दा कुवाको पानी सबैलाई पुग्न छाडी सक्यो । गर्मी समयमा कुवा सुक्दै जाँदा पिउने पानीको हाहाकार झनै बढ्दै जान्छ । रमाईबासीलाई घरधन्दा चलाउदा सबै भन्दा पिउने पानी जिबनकै टन्टा बन्यो ।
रमाई गाउँको बिचमा रहेको कुवा
एउटा दात्रिय सँस्था एडीबीद्वारा बाह्रजथाकबाट खानेपानी योजना लागु भयो । त्यहि योजनाबाट केहि वर्षहरु गुजरा चले ।
खानेपानी योजना साबिक वडाका ६, ७, ८, ९ ले उपभोग गर्ने हुँदा पिउनलाई पनि त्यति धेरै प्रयाप्त भएन । जसको घरधुरी संख्या करिव ४-५ सय भन्दा बढी छन । यो त २२ बर्ष पहिलेको कुरा हो । अहिले घर संख्या बृदी र मर्मत संहारमा समस्याका कारण पानी बन्द भएको छ ।
पानी ल्याउने स्रोत बाह्रजथाक भन्दा अनेत्र छैन । उक्त पानी ल्याउन छिमेकी गाउँ कटाएर ल्याउनु पर्छ तर छिमेकीहरुको छेकबारले दैनिक कलह बेहोर्नु पर्छ, हुकुम बहादुर भण्डारी बताउछन ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश तहबाट खानेपानी मर्मत संहारका लागि भनेर ५० लाख रकम बिनियोजन भयो तर उक्त रकमले पानी गाउँ सम्म ल्याउन सकेन ।
बिगत साउन- भदौ महिना देखि पानी पूर्ण रुपले बन्द रह्यो । निर्माण समितिलाई पानीको अबस्था बुझ्दा निर्माण प्रक्रियामै रहेको जनाए पनि स्थानीयबासीहरुमा पानी आउने आशा हरायो । किनकि निर्माण गरिएको रिजर्भ ट्यांकीमा पानी चढ्न सकेको छैन ।
यसरी पुरानो एडीबीको खानेपानी सुचारु हुने आशा हराएपछि रमाईका ९७ घरधुरीले प्रतिघर २५ हजार उठाएर पाइप किनेर सोहि ठाउँको करिव ८ सय मिटर माथिबाट रमाईबासीले निजि पानी ल्याए । आखिर बाच्नु जो थियो !
पानीको पाइप काटेका टुक्राहरु
पानी ल्याएको महिना दिन नपुग्दै साविक ९ नम्बरका छिमेकी आफन्त लाग्नेहरुले पाइपलाइनको बाटो छेकिदिए । केहि व्यक्तिहरुले पाइपलाइन काटेर टुक्रा टुक्रा पारिदिए ।
यो पानीका लागि अघि देखि नै बिबाद झेल्दै आएका छन् । पाइपलाइन गाड्न नदिने र काटी दिने कार्यमा केहि व्यक्तिहरु लागिपरेको रमाईबासीको आरोप छ ।
२७ गतेको राती गाडेको पाइपलाइन निकालेर टुक्रा टुक्रा पारिदिएपछी स्थानीय इलाका प्रहरी चौकी सुकाओढारमा उजुरी भयो र दुवै पक्षका स्थानीयहरू बिच पाइपलाइन नकाटी दिने बिषयमा २८ गते मेलमिलाप भयो । यद्यपी पाइप काट्ने व्यक्तिहरुको खोज अनुसन्धान भैरहेको इलाका प्रहरी चौकी सुकाओढारले जनाएको छ।
साबिकको ९ नम्बर वडाका केहि व्यक्तिहरुले एडीबीको खाने पानीको मुहान भन्दा करिव डेढसय मिटर भन्दा माथि निजि पानी ल्याएपछि, रमाई बासीहरुले करिव ८ सय मिटर माथि पानी हालेको स्थानीय सेतीराम ओलीले दावी गरे । एडीबीको पुरानो खानेपानीलाई नै सुचारु गर्नेगरी त्यो भन्दा माथि कसैले पनि निजि पाईपलाइन हाल्न नपाइने निर्णयलाई कार्यन्वयन गरीए आफुहरु पनि सहमत हुने र आफुहरुले प्रतिघर २५ हजार रकम उठाएर खरिद गरेको पाइप उठाउने रमाईका स्थानीय खडक ओलीले बताए ।
स्थानीय बिच छलफल हुँदै
बिबादित बन्दै आएको खानेपानीको बिषयमा स्थानीय तहमा निबेदन दिँदा वडाध्यक्ष भुपाल दमाईले आफुले हल गर्न नसक्ने भन्दै गाउँपालिकामा जान सुजाव दिए । गाउँपालिकाले पानीको समस्या हल गरिदिने आश्वासन दिएपनि हालसम्म कुनै पहल नगरेको स्थानीय युवा बालकृष्ण वलीले गुनासो सुनाए ।
यसरी गाडेको पाइपलाइन निकालेर टुक्रा टुक्रा बनाई दिएपछि रमाईकि गौरी ओलीले पिडा सुनाईन ‘पानी खान पाइन्छकी भनेर कसैले भैसी बेचिम, कसैले गोरु बेचिम, अनि २५ हजार जुटाएर पाइप किनिम, आज पाईप टुक्रा टुक्रा पार्दिएछन्, त्यसलाई सुकिदहका सिद्दले हेरुन’ ।
यसरी पानीको हाहाकार खेपिरहेका गौरीहरुले देउता भकाउनु बाहेक अरु उपाए नै के थियो र !
खानेपानी बिबादको समाधानका लागि स्थानीयतह र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समिति बिच छलफल गरि उपाए खोज्ने सहमति जुटेको छ तर उक्त समस्याप्रति स्थानीय तहको सक्रियता रहेमा मात्र सम्भव हुने देखिन्छ नत्र फेरिपनि खानेपानी बिषयलाई लिएर पाइपलाइन काट्ने, छेकबार हुने अबस्था उस्तै रहने देखिन्छ ।
आफ्नै भद्र भलादमीले खुट्टा तानातान गर्दा स्थानीयलाई शास्ती
रमाई गाउँका केहि टाँठा-बाठा भद्र भलादमी भनिने व्यक्तिहरुको आपसी बिबादका कारण ५१ लाखको सडक योजना अलपत्र परेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७/०७८ मा गंगादेव गाउँपालिकाबाट २५ लाख र प्रदेश तहबाट २६ लाख गरि कुल ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो ।
सुकाओढार-धानछरे-पनेराचौर रमाई-भुर्ती सडक योजनाका लागि वडाध्यक्ष भुपाल दमाईको रोहबरमा हुकुम बहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो तर नेपाली काँग्रेस गंगादेव -२ का सभापति तथा स्थानीय बुद्दिजिबी भिम बहादुर वलीको नेतृत्वमा उक्त समितिलाई अबैधानिक भन्दै गाउँपालिकामा निबेदन दिएपछि बिबाद उत्पन्न भएको हो ।
भिम बहादुर वलीले उपभोक्ता समितिको संयोजकमा आफु हुनुपर्ने दावी गरिरहेको स्थानीय खड्क ओलीले बताए । यसरी आपसी बिबादका कारण गाउँको सडक योजना चालु हुन नसकेको सेतीराम ओलीले दुखेसो पोखे ।
उपभोक्ता समितिमा मनोनित हुकुम बहादुर भण्डारी नेपाली कांग्रेस गंगादेव गाउँ कमिटिका सदस्य हुन् ।
गाउँका भद्र भलादमीहरुको बिबादका कारण सर्वसाधारण जनताले दुख पाइरहेका छन् । स्थानीयतहले यसको समस्याको समाधान खोज्न ढिलाई गरिरहेको स्थानीयबासीहरुको गुनासो गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी श्री सिद्द प्राथमिक बिद्यालय रमाईको बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति गठनमा समेत बिबाद उत्पन्न हुँदा गठन हुन सकेको छैन । बिब्यस गठनमा समेत केहि व्यक्तिहरुले आफु अनुकुल समिति गठन गर्न खोज्दा बिबाद उत्पन्न भएको रमाईकै एक स्थानीयले बताए ।
यस अघिको बिब्यसको १६ महिने कार्यकाल चलिरहदा बिब्यसका ५ जना बहुमत सदस्यहरुले राजिनामा दिँदा बिब्यस बिगठन भएको थियो । स्थानीय भलादमीहरुको उक्साहटमा ५ जना सदस्यलाई राजिनामा दिन लगाएर समिति नै बिगठन गर्न लगाएको निवर्तमान बिब्यस अध्यक्ष रेशम ओलीले आरोप लगाएका छन् ।
२९ माघ २०७७, बिहीबार को दिन प्रकाशित